PressReader - Isolezwe: 2018-02-14 - Okunganqanda ukuzibulala kwentsha
Okunganqanda ukuzibulala kwentsha
Isolezwe - 2018-02-14 - IZINDABA - LUNGI LANGA
INHLANGANO eqwashisa ngezifo ezithikameza ingqondo, iSouth African Depression and Anxiety Group (SADAG), ithe ukuxoxa nezingane kungenza umehluko ngokuthi zigcine zingasithathanga isinqumo sokuzibulala.
Ngokwezibalo ingane eyodwa kwezine isike yazama ukuzibulala. Leli sonto elokuqwashisa ngokuzibulala kwentsha, iTeen Suicide Awareness Week. Kuvela ukuthi intsha eningi izibulala ngokuzilengisa.
UNksz Cassey Chambers weSADAG uthe ukuxoxa nentsha kungenza umehluko ingasithathi isinqumo sokuzibulala. Uthe akudingeki ukuthi abantu bazi kabanzi ngezifo zengqondo ukuze basize intsha ingagcini izibulele ngenxa yezimo ebhekene nazo.
“Ukugqugquzela ingane okungenzeka ukuthi icabanga ukuzibulala ukuze ivuleleke ixoxe nokuyilalela ngokungayicwasi kungenza umehluko kusize asebephelelwe yithemba,” kusho uNksz Chambers
Uthe kubalulekile nokuthi abantu babe neso lokubona izimpawu ezikhombisa ukuthi umuntu ufuna ukuzibulala ukuze atholelwe usizo.
Ngokwenhlangano yezempilo emhlabeni, iWorld Health Organisation (WHO), baku-800 000 abantu abashona ngokuzibulala. Iningi labo liphakathi kweminyaka engu-15 kuya ku-29.
Njengoba kuqwashiswa ngokuzibulala kwentsha, iSADAG izibophezele ngokuya ezikoleni ukuze ixoxe nezingane ngaphansi kohlelo lwayo olugqugquzela ukuthi kuphunyelwe obala ngokuzibulala iSuicide Shouldn’t be a Secret.
Kulindeleke ukuthi baye ezikoleni ezilinganiselwa ku-1500 eNingizimu Afrika yonke beqwashisa abafundi ngokubaluleka kokukhuluma uma becabanga ukuzibulala. Bazophinde banike abafundi amabhengela anezinombolo abangazishayela uma bezizwa belahlekelwe yithemba beba nale micabango. UDkt Helen Clarke, udokotela wengqondo, uthe intsha ihlangabezana nezingqinamba eziningi uma isakhula.
Uthe kubalulekile ukuthi kuxhunyanwe nayo uma kuxoxwa ngokugwema ukuzibulala kwayo ngoba isikhathi esiningi ixoxa yodwa uma inezinkinga.
“Umuntu omusha onemicabango yokuzibulala akuvamile ukuthi atshele abazali bakhe kodwa kuyenzeka atshele abangani. Kubalulekile ukuthi lusatshalaliswe entsheni ulwazi ngezindlela zokugwema ukuzibulala ngokuthi kuyiwe ezikoleni ukuze yazi ukuthi ingenzani ukusiza abangani abacabanga ukuzibulala,” kusho uDkt Clarke.